Ngasekupheleni kwekhulu le-13 iinqununu zeenqununu ezincinci zavela e- Anatolia , zixutywa phakathi kweeByzantium naseMongol . Le mimandla yayilawulwa yi-ghazis - amaqhawe anikezelwe ukulwa namaSilamsi - kwaye alawulwa yizikhulu, okanye i-'beys'. Enye inyosi enjalo yayiyi-Osman I, inkokeli yamaTurkmen nomads, eyanikela igama layo kwi-'tttt '', indawo eyakhula kakhulu ngexesha leeminyaka ezimbalwa zokuqala, iphakama ibe yimbuso yehlabathi enkulu. Ubukumkani base-Ottoman , obusa iipatriki ezinkulu zaseMpuma Yurophu, 'iMiddle East' kunye neMedithera, yahlala kwada ngowe-1924, xa imimandla esele iguqulelwe ibe yiTurkey.
I-Sultan yayingumntu wolawulo lwezenkolo kodwa yaguquka ukufihla urhulumente wehlabathi kunye nekhulu leshumi elinanye yayisetyenziselwa abalawuli beengingqi; I-Mahmud yaseGhazna yayiyi-'Sultan 'yokuqala njengoko siyikhumbula ngokuqhelekileyo. Abalawuli base-Ottoman basebenzisa igama elithi Sultan malunga nobukhosi babo bonke. Ngo-1517 i-Ottoman Sultan Selim ndathatha iCaliph eCairo kwaye yamkela eli thuba; I-Caliph ingumxholo ophikisanayo oqhelekileyo uthetha inkokeli yehlabathi lamaSilamsi. Ukusetyenziswa kwe-Ottoman kwekota kwaphela ngowe-1924 xa ubukumkani bubuyiselwa yiRiphabhulikhi yaseTurkey. Iingxowa zendlu yobukhosi ziye zaqhubeka zilandela umgca wazo; njengoko kubhalwe ngo-2015, baqaphela intloko ye-44 yendlu.
Olu luhlu lweziganeko lwabantu abaye babusa ubukhosi base-Ottoman; Imihla enikeziweyo yimizuzu yolawulo olukhankanywe ngalo. Nceda uqaphele: Ubukhosi base-Ottoman bubizwa ngokuba yiTurkey okanye uMbuso waseTurkey, kwimithombo yamandulo.
Osman I c.1300 - 1326 (Bey kuphela; wabusa ukususela ngo-1290)
Imemori yaseTurkey, umbhalo wesandla waseArabhu, iCicogna Codex, inkulungwane ye-17. DEA / A. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
Nangona u-Osman Ndinikela igama lakhe kuBukhosi base-Ottoman, nguyise u-Ertugrul owakha inqununu kwiSögüt. Kwavela kulokhu u-Osman walwela ukukhulisa indawo yakhe ngokumelene neByzantine, ethatha izikhuselo ezibalulekileyo, ukuwunqoba iBursa kwaye kuthathwa njengomsekeli wobukhosi base-Ottoman.
Orchan 1326 - 1359 (iSultan)
Orchan / Orhan wayengunyana ka-Osman I kwaye waqhubeka nokwandiswa kwemimandla yentsapho ngokuthatha iNicaa, uNicomedia, kunye neKarasi ngeli xesha ekhangela umkhosi omkhulu. Esikhundleni sokulwa nje neByzantines Orchan kunye noJohn VI Cantacuzenus kunye nokwandisa umdla we-Ottoman kwiBalkans ngokulwa noJohn V Palaeologus, amalungelo alinayo, ulwazi kunye neGallipoli. I-Ottoman state yasungulwa.
UMrad I 1359 - 1389
Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe
Unyana ka-Orchan, uMrarad ndijongene nokunyuka okukhulu kweendawo zase-Ottoman, ukuthatha u-Adrianople, ukunqoba i-Byzantines, ukunqoba i-crusade kunye nokuwina ukunqoba eSerbia naseBulgaria okunyanzele ukuzithoba, kunye nokwandisa kwenye indawo. Nangona kunjalo, naphezu kokuphumelela i-Battle of Kosovo kunye nendodana yakhe, uMrarad wabulawa ngumqhinga wokubulala. Wandisa i-Ottoman state machine.
Bayezid I I-thunderbolt 1389 - 1402
I-Bayezid yanqoba iindawo ezininzi zeBalkans, yalwa noVenice kwaye yaqhubeka ikhuseleka iminyaka engama-Constantinople, kwaye yachithwa nomkhosi wokulwa naye emva kokuhlasela kwakhe eHungary. Kodwa ulawulo lwakhe lwachazwa kwenye indawo, njengoko iinzame zakhe zokwandisa amandla eAnatolia zamenza waxabana noTamlane, owatshutshisa, wabamba waza wabanjwa eBeyezid de wafa.
I-Interregnum: Imfazwe yombutho 1403 - 1413
I-Circa 1410, Ukuqoshwa kweNkosana yaseTurkey kunye nendodana kaSultan Bayazid I, uMoses (- 1413). (I-Hulton Archive / Getty Izithombe
Ngokulahlekelwa kweBayezid, ubukhosi base-Ottoman bugcinwe ekubhujisweni ngokupheleleyo kwiYurophu naseTamerlane ebuyela empuma. Oonyana bakaBhayezid bebengakwazi ukulawula kuphela kodwa balwa imfazwe yoluntu phezu kwayo; UMoses Bey, Isa Bey, noSüleyman banqotshwa nguMehmed I.
Mehmed I 1413 - 1421
NguBelli değil (http://www.el-aziz.net/data/media/713/I_Mehmed.jpg) [I-domain yoluntu], nge-Wikimedia Commons
UMehmed wakwazi ukuhlanganisa amazwe ase-Ottoman phantsi kolawulo lwakhe (ngentengo yabazalwana bakhe), kwaye wamkela uncedo kumlawuli waseByzantium uManuelel. I-Walachia yaguqulwa ibe yindawo ephasayo, kwaye umculi ozenza ngathi ungumnye wabazalwana bakhe wabonwa.
UMradrad II 1421 - 1444
Umzobo we-Murad II (1421_1444, 1445_1451), iSultan yesithandathu yolawulo lwase-Ottoman. Umncinci ovela kwiZubdat-al Tawarikh ngu-Seyyid Loqman Ashuri, ozinikele kwiSultan Murad III ngo-1583. Ikhulu le-16. ITurkey ne-Islamic Arts Museum, i-Istanbul. Leemage / Getty Izithombe
UMlawuli uManuel II unokuncedisa uMehmed I, kodwa ngoku uMurad II kwafuneka alwe namaqela atshabalalayo axhaswa yi-Byzantines. Kungenxa yoko, xa benqobile, i-Byzantine yayisongelwa kwaye iphoqelelwe ukuba ikhuphuke. Ukuqhubela phambili kwi-Balkans kubangele imfazwe ngokumelene nenkululeko enkulu yaseYurophu eyalahla ilahleko. Nangona kunjalo, ngowe-1444, emva kokulahlekelwa yintlawulo kunye nezoxolo, uMrad wadlwengula ngenxa yonyana wakhe.
Mehmed II 1444 - 1446
Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe / Getty Izithombe
U-Mehmed wayeneminyaka elishumi elinesibini xa uyise ekhanyela, waza wabulawula kwesi sigaba sokuqala kwiminyaka emibini nje kuphela kwaze kwaba yimeko yokuba i-warzones yase-Ottoman ifune ukuba uyise aqalise ukulawula.
UMradrad II (ixesha lesi-2) 1446 - 1451
Umfanekiso we-Murad II (Amasya, 1404-Edirne, 1451), uSultan woBukumkani base-Ottoman, umzekeliso ovela kwiMemori yaseTurkey, umbhalo wesandla waseArabhu, iCicogna Codex, inkulungwane ye-17. DEA / A. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
Xa umbambano waseYurophu waphula izivumelwano zawo uMurad wahola umkhosi owawunqobileyo, wawa ngobuncwane kuye: waqalisa amandla, aphumelela iMfazwe yesiBili yaseKosovo. Wayeyinyameko ukuba angayicaphukisi ibhalansi eAnatolia.
Mehmed II, uMnqoli (ixesha lesi-2) 1451 - 1481
'Ukungena kukaMehmet II ukuya eConstantinople', 1876. Umculi: UJean Joseph Benjamin Constant. Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe / Getty Izithombe
Ukuba ikhefu lokuqala lokulawula lalisifutshane, okwesibini kwakukuguqula imbali. Wayeyisa uKonstantinople kunye neminye imimandla eyayilo hlobo uhlobo lolawulo lwe-Ottoman kwaye lwakhokelela ekulawuleni kwayo iAnatolia neBalkan. Wayenobundlobongela kwaye ukhaliphile.
Bayezid II i-1481 - 1512 nje
Bayezid II, uSultan wobukhosi base-Ottoman, c. 1710. Umculi: Levni, Abdulcelil. Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe
Unyana kaMehmed II, uBayezid kwafuneka alwe nomntakwabo ukuze athole itrone kwaye alwe ukuze akhusele ukwanda okukhulu kowise, owayengumlingani we-euro. Akazange azinikele ngokupheleleyo kwimfazwe ngokumelene namaMamlūks kwaye waba nempumelelo encinci, kwaye nangona wayeyitshitshise enye inyana engummvukeli uBaisond wayengenakuyeka uSelim, kwaye, esaba ukuba wayelahlekelwe yinkxaso, wayenqwenela ukufumana inkxaso. Wafa ngokukhawuleza emva koko.
I-Selim I-1512 - 1520 (zombini i-Sultan kunye no-Caliph emva kwe-1517)
Leemage / Getty Izithombe
Emva kokuba athathe itrone emva kokulwa noyise, uSelilim waqinisekisa ukuba wasusa zonke izinto ezisongelayo, wamshiya nendodana enye, uSüleyman. Ukubuyela kwiintshaba zikayise, uSelim wanda waya eSiriya, eHejaz, ePalestina naseYiputa, kwaye eKairo wanqoba i-caliph. Ngomnyaka we-1517 isihloko sathunyelwa eSelim, senza umkhokheli ongumfuziselo wamazwe aseSilamsi.
U-Süleyman I (II) Omkhulu kakhulu 1521 - 1566
Ngokuqinisekileyo enkulu kunazo zonke iinkokeli zase-Ottoman, uSüleyman akazange akhulise ubukhosi bakhe kuphela kodwa wakhuthaza ixesha elimangalisayo lokuzibuza. Wawunqoba uBelgrade, wachitha iHungary kwiMfazwe yaseMohacs, kodwa akazange akwazi ukunqotshwa kweVienna. Walwa kwakhona ePersia kodwa wafa ngexesha lokungqingwa eHungary.
Naphezu kokufumana umzabalazo wamandla kunye nomntakwabo, uSelilim II wayevuyayo ukunika abanye amandla okwandisa amandla, kwaye iiJanishi zakwa-Elite zaqala ukuphazamisa iSultan. Nangona kunjalo, nangona ukubusa kwakhe kwambona intsebenziswano yaseYurophu yaxabela i-Ottoman navy e-Battle of Lepanto, enye entsha yayilungele kwaye iyasebenza ngonyaka ozayo. UVenice kwafuneka amkele ii-Ottomans. Ulawulo lukaSelim lubizwa ngokuba luqala ukuhla kweSultanate.
UMrad III 1574 - 1595
Umfanekiso we-Murad III (1546-1595), iSultan yoBukumkani base-Ottoman, umzekeliso ovela kwiMemori yaseTurkey, umbhalo wesandla waseArabhu, iCicogna Codex, inkulungwane ye-17. DEA / A. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
Isimo se-Ottoman kwi-Balkan saqala ukuphazamiseka njengoko i-united states ihlangene neAustria ngokumelene noMrad, kwaye nangona wenza inzuzo ekulweni ne-Iran iimali zombuso ziye zonakalisa. UMrad utyholwa ukuba unobungozi bezopolitiko zangaphakathi kwaye uvumele iiJanishe ukuba ziguquke zibe yinto esongela ama-Ottoman, kungekhona iintshaba zabo.
Mehmed III 1595 - 1603
I-Coronation ye-Mehmed III kwiNdlunkulu ye-Topkapi ngo-1595 (ukusuka kwi-Manuscript's Campaign yeHungary). Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe / Getty Izithombe
Imfazwe elwa neAustria eyaqala phantsi kwe-Murad III yaqhubeka, kwaye uMehmed wayenempumelelo ethile ngokusinqoba, i-sieges, kunye nokulwa, kodwa wajamelana nokuvukela ekhaya ngenxa yokuncipha kwe-Ottoman kunye nemfazwe entsha ne-Iran.
Ngakolunye uhlangothi, imfazwe neAustria eyayihlala kwiSultan ezininzi zafika kwisivumelwano soxolo e-Zsitvatörök ​​ngo-1606, kodwa kwaba yiphumo elibangelwa ukuzingca kwe-Ottoman, ukuvumela abahwebi baseYurophu ukuba bangene kwilizwe.
Umzobo weMustafa I (Manisa, 1592 - Istanbul, 1639), iSultan yoBukumkani base-Ottoman, umfanekiso ovela kwiMemori yaseTurkey, umbhalo wesandla waseArabhu, iCicogna Codex, inkulungwane ye-17. DEA / A. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
Ebhekwa njengomlawuli obuthakathaka, uMustafa olwahlukileyo ndasuswa emva nje kokuthatha amandla, kodwa ubuya kubuya ngo-1622 ...
DEA / G. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
U-Osman weza esihlalweni sobukhosi elishumi elinesine waza wazimisela ukuphazamisa iPoland kwilizwe laseBalkan. Nangona kunjalo, ukutshatyalaliswa kweli phulo kwenza u-Osman wakholwa ukuba imikhosi yaseJaniss yayingumqobo, ngoko yanciphisa imali yabo kwaye yaqalisa isicwangciso sokufumana umkhosi omtsha, ongewona uJanissary kunye nesiseko samandla. Baye baqonda, bambulala.
UMustafa I-1622 - 1623 (ixesha lesi-2)
Buyela e troneni ngamasosha ama-Janitary once, i-Mustafa yayilawulwa ngumama kwaye iphumelele.
UMrad IV 1623 - 1640
I-Circa 1635, i-Engraving ye-Sultan Murad IV. I-Hulton Archive / Getty Izithombe
Njengoko wafika esihlalweni sobudala eneminyaka eyi-11, umbuso wokuqala u-Murad wabona amandla ezandleni zikanina, iiJanisha, kunye ne-grand viziers. Ngokukhawuleza nje, uMrad wawaxabela abo baxabana nawo, wathatha amandla apheleleyo waza wabuyela eBaghdad e-Iran.
Xa wayecetyiswa kwiminyaka yokuqala yokubusa kwakhe ngu-grand vizier Ibrahim wenza uxolo kunye ne-Iran ne-Austria; xa abanye abacebisi bebephethe ngokukhawuleza, wangena kwimfazwe neVenice. Emva kokubonakalisa iintambo kunye nokuphakamisa irhafu, wachazwa kwaye abaJanise bambulala.
Mehmed IV 1648 - 1687
Ukuza esihlalweni sobukhosi ezintandathu, amandla asebenzayo abelwe ngabalandeli bakhe bokubeletha, iiJanisi kunye ne-grand viziers, kwaye wayevuyiswe yilo kwaye wayekhetha ukuzingela. Ukuhlaziywa koqoqosho kokulawula kwaba phantsi kwabanye, kwaye xa ehluleka ukumisa i-vizier enkulu ukuqala imfazwe neVienna, akakwazanga ukuhlukana nokuhluleka kwaye yafakwa. Wavunyelwa ukuba ahlale emhlala phantsi.
Süleyman II (III) 1687 - 1691
USyleyman wayevalelwe iminyaka engamashumi amane nesithandathu ngaphambi kokuba abe yiSultan xa umkhosi uphonsela umntakwabo, kwaye ngoku akakwazanga ukuyeka ukutshatyalaliswa kwakhe ngaphambili. Nangona kunjalo, xa wayinika umlawuli kwi-grand vizier uFazıl Mustafa Paşa, lo mva waphenduka imeko.
U-Ahmed walahlekelwa yi-vizier enkulu kakhulu eyayizuze i-Suleyman II kwimfazwe, kwaye ama-Ottoman alahlekelwa ngumhlaba omkhulu njengoko engakwazanga ukukhangela aze azenzele into eninzi, ekhokelwa yinkundla yakhe. I-Venice yahlaselwa, kwaye iSiriya ne-Iraq bahlala bengenasiphelo.
UMustafa II 1695 - 1703
NgoBilinmiyor - , i-Public Domain, isiqhagamshelo
Ukuzimisela kokuqala ukulwa neYurophu engcwele yeYurophu kwaholela ekuphumeleleni kwangaphambili, kodwa xa iRashiya yafuduka yaza yathatha i-Azov imeko yajika, kwaye uMusta wafuneka amkele iRashiya ne-Austria. Oku kugxila ekuvukeleni kwenye indawo ebukumkanini, kwaye xa uMustafa ejikelele kwimicimbi yehlabathi ukuba afune ukuzingela.
U-Ahmed III 1703 - 1730
Sultan Ahmed III Ukufumana i-ambassador yaseYurophu, i-1720s. Kufunyenwe kwiqoqo lembali yasePera, i-Istanbul. Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe / Getty Izithombe
Emva kokuba uCharles XII waseSweden ekhusele ngenxa yokuba wayilwa neRussia , u-Ahmed walwa naloo mva ukuba awalahle ngaphandle kwefuthe le-Ottoman. UPetros ndalwa ukunikela, kodwa umzabalazo olwa no-Austria awuzange uhambe. U-Ahmed wakwazi ukuvuma ukwahlukana kwe-Iran kunye neRussia, kodwa i-Iran yaxosha ama-Ottomans endaweni yoko, ukutshatyalaliswa okwakubonwe ngu-Amhed.
Mahmud I-1730 - 1754
UJean Baptiste Vanmour [Ulawulo lwaseburhulumenteni], nge-Wikimedia Commons
Emva kokufumana itrone yakhe ebusweni bovukeli, okwaquka ukuvukela kukaJanny, uMajmud wakwazi ukujika umkhosi e-Austria kunye neRashiya, ebhalisa iSivumelwano saseBelgrade ngo-1739. Akakwazanga ukwenza okufanayo ne-Iran.
IWindows Domain, isiqhagamshelo
Ulutsha luka-Osman entolongweni lubekwe icala ngenxa yezobukhulu obubekwe uphawu lokulawula kwakhe, njengokuzama ukugcina abafazi besuka kuye, kunye nenyaniso awazange azenzele yona.
UMustafa III 1757 - 1774
UMustafa III wayesazi ukuba uMbuso we-Ottoman wawuncipha, kodwa ukuzama kwakhe ukuguqulwa kwamandla kwakunzima. Wayekwazi ukuguqula umkhosi kwaye ekuqaleni wayekwazi ukugcina iSivumelwano saseBelgrade kwaye agweme ukuqhubana kweYurophu. Nangona kunjalo, ukuxhatshazwa kweRussia-Ottoman kwakungenakuvalwa kwaye kwaqala imfazwe eyayihamba kakubi.
Abdülhamid I 1774 - 1789
Ekubeni ezuze imfazwe imfazwe engalunganga kumzalwana wakhe uMustafa III, u-Abdülhamid kwafuneka asayine uxolo oluhlazo kunye neRussia okwakungekho ngokwaneleyo, kwaye kwafuneka abuye ekulweni kwakhona kwiminyaka emva yokulawula kwakhe. Wazama ukuguqula nokuhlanganisela amandla kwakhona.
Iinkcukacha ezivela kwiNkundla yokuBamkela kwiNkundla yeSelim III kwiNdlu yaseTopkapi, i-gouache ephepheni. DEA / G. DAGLI ORTI / Getty Izithombe
Ekubeni iimfazwe ezizuze njengefa, uSelim III wayefanele aphelise uxolo kunye ne-Austria kunye ne-Russia ngokwemigaqo yabo. Nangona kunjalo, ephefumlelwe nguyise u-Mustafa III kunye noguquko olukhawulezayo lweNguqulelo yesiFrentshi , u-Selim waqalisa inkqubo yohlaziyo olubanzi. Ngoku kwakhona iphefumlelwe nguNapoleon , uSelilim wasesondeza ama-Ottomans kodwa wayeka xa ejongene nokuvukela. Wahluthwa ngovukelo olunjalo waza wabulawa ngumceli wakhe.
UMustafa IV 1807 - 1808
NguBelli değil - , i-Public Domain, isiqhagamshelo
Ekubeni ephethe amandla njengenxalenye yempendulo yokumelana nokuguqula umninawa uSelim III, owaye wacela ukuba abulawe, uMustafa ngokwakhe walahlekelwa ngamandla ngokukhawuleza waza wabuya wabulawa ngemiyalelo yomntakwabo, i-Sultan Mahmud II.
Sultan Mahmud II Ukushiya iMosqued Mosque, uConstantinople, ngo-1837. Umculi: Mayer, uAgasuste (1805-1890). Izithombe zeMveli / i-Getty Izithombe / Getty Izithombe
Xa amandla okuguqula isimo azama ukubuyisela iSelim III, amfumana efile, waxoshwa uMustafa IV waza wakhuphula i-Mahmud II etroneni, kwaye iingxaki ezininzi kwafuneka ziyiswe. Ngaphansi kolawulo lukaMadmud, amandla ase-Ottoman eBalkans ayewa phantsi kweRashiya kunye nobuzwe, ukuxhatshazwa. Imeko kwenye indawo ebukumkanini yayingcono kakhulu, kwaye uMahmud wazama ukuguqula ezinye izinto: ukutshabalalisa iJamani, ukuzisa iingcali zaseJamani ukuvuselela umkhosi, ukufaka urhulumente weKhabhinethi. Wafezekisa kakhulu nangona ilahleko zempi.
U-Abdülmecit I-1839 - 1861
NguDavid Wilkie - Royal Collection Trust, Kamu Malı, Link
Ngokuhambisana neengcamango ezahlupha iYurophu ngelo xesha, u-Abdülmecit wandisa ukuguqulwa koyise ukuba aguqule isimo se-Ottoman state. I-Eable Edict ye-Rose Chamber kunye ne-Imperial Edict yavula ixesha leTanzimat / Ukulungiswa kwakhona. Wasebenzela ukugcina amandla amakhulu eYurophu kakhulu ecaleni lakhe ukuze abambe ububambano ngakumbi, kwaye bamnceda ukuba anqobe iMfazwe yaseCrimea . Nangona kunjalo, umhlaba wawulahlekile.
U-Abdülaziz 1861 - 1876
Ngu Рисовал П. Ф. Борель, гравировал И. И. UMatykhin [I-domain yoluntu], nge-Wikimedia Commons
Nangona eqhubeka nokuguqulwa komzalwana wakhe kunye nokwazisa iintlanga zaseNtshona-ntshona, wafumana umgaqo-nkqubo malunga ne-1871 xa abacebisi bakhe bafa kwaye xa iJamani iyanqoba iFransi . Ngoku uqhube phambili phambili kweyona nto 'yamaSilayam' efanelekileyo, eyenziwa ngabahlobo kunye nokuphuma kunye neRashiya, wachitha imali eninzi njengoko ityala liphakanyisiwe kwaye lafakwa.
Ngentshonalanga ekhangele inkululeko, uMrarad wabekwa etroneni ngabavukeli ababemgxotha umalume wakhe. Nangona kunjalo, wahlulwa kwengqondo waza wahlala phantsi. Kukho iinzame ezingapheliyo zokumbuyisela.
Abdülhamid II 1876 - 1909
Imifanekiso yamaphephandaba ka-Abdülhamit (Abdul Hamid) II, uSultan wobukhosi base-Ottoman, ukusuka kwinqaku le-1907 elinesihloko esithi "I-Sour Sick Sultan njengoko Yena". NguFrancis (iSan Francisco Call, ngoJanuwari 6, 1907) [I-domain yoluntu], nge-Wikimedia Commons
Emva kokuzama ukunqanda ukungenelela kwamanye amazwe nomgaqo wokuqala wase-Ottoman ngo-1876, u-Abdullhamid wenza isigqibo sokuba entshonalanga ayiphenduli njengoko befuna umhlaba wakhe, kwaye esikhundleni sakhe wasibeka iphalamende kunye nomgaqo-siseko waza wabusa iminyaka engama-40 njenge-autocrat eqinile. Nangona kunjalo, abantu baseYurophu, kuquka iJamani, bakwazi ukufumana izikhonkwane. Waxhasa i-pan-Islamism ukuba ibambe umbuso wayo kunye nokuhlaselwa kwabangaphandle. I- Young Turk evuke ngo-1908, kunye ne-counter- revolt , yabona u-Abdülhamid ekhutshwe.
Mehmed V 1909 - 1918
NgeBain News Service, umshicileli [Ifayile yoluntu, isizinda soLuntu okanye isizinda soLuntu], nge-Wikimedia Commons
Ukhutshwe ngobomi obuthule, obunobhala bokusebenza njengoSultan ngovuko lwe-Young Turk, wayengumlawuli wezomgaqo-siseko apho amandla asebenzayo ahlala kunye neKomiti yeManyano kunye neNtuthuko. Wayelawula kwiimfazwe zeBalkan, apho ama-Ottomans alahlekelwa amaninzi kwiindawo zaseYurophu eziseleyo kunye nokungeniswa kweMfazwe Yehlabathi 1 . Oku kwahamba kakhulu, kwaye uMehmed wafa ngaphambi kokuba uConstantinople ahlale.
Mehmed VI 1918 - 1922
UMehmed VI wathatha amandla ngexesha elibucayi, njengoko ama-ally ally of World War One ajongene nolawulo oluthatywayo lwama-Ottoman kunye nobudlelwane babo bobuzwe. U-Mehmed waqala ukuxoxisana neentlangano kunye nokuqhelisa ubuzwe kunye nokugcina ubukumkani bakhe, ngoko uthetha ngeentlanga ukukhetha ukhetho. Umzabalazo waqhubeka, kunye no-Mehmed ukuphazamisa ipalamente, i-nationalists ehleli uhulumeni wabo e-Ankara, uMehmed ukusayina i-WW1 Peace Treaty yaseSevres eyayishiye i-Ottomans njengesiTurkey, kwaye kungekudala amazwe aphelisa ihlabathi. UMehmed wanyanzelwa ukuba abaleke.
U-Abdülmecit II 1922 - 1924 (u-Caliph kuphela)
I-Von Unbekannt - iThala le-Congress, iGemeinfrei, Isixhumanisi
Indoda yayisuswe kwaye umzala wakhe owayesemdala wayebalekile, kodwa u-Abdülmecit II ukhethwa ngu-caliph nguRhulumente omtsha. Wayenalo igunya lopolitiko, kwaye xa iintshaba zombuso ezintsha zihlangene, u-caliph uMustafa Kemal wanquma ukuvakalisa iRiphabliki yaseTurkey, kwaye emva koko apheliswe i-caliphate. U-Abdülmecit waya ekuthinjweni, ekugqibeleni kwabalawuli base-Ottoman.
Amanqaku angama-5 aphezulu amaTshayina omama kwiimifanekiso eziphathekayo
Isikhokelo Sokufunda "I-Fat Pig" ngo-Neil LaBute
Ukuqonda iiRhafu zeNzala